Nagarik Bazaar - मिडरेन्ज स्मार्टफोन र फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन, भिन्नता के ?
मिडरेन्ज स्मार्टफोन र फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन, भिन्नता के ?
आजभोलि बजेट स्मार्टफोनहरु पनि राम्रा हुँदै गएका छन् र राम्रा स्मार्टफोन पनि सस्ता हुँदै गएका छन् । सामान्य स्मार्टफोनसँग सम्बन्धित कामहरु (जस्तै फोन कल, इन्टरनेट, फोटो खिच्ने आदि) मात्र गर्न रुचाउने र नयाँ तडकभडकमा खासै चासो नदिनेले फ्ल्यागसिपको सट्टा मिडरेन्ज स्मार्टफोनबाटै पूर्ण सन्तुष्टि पाउन सक्छन् ।
फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोनको तुलनामा मिडरेन्ज स्मार्टफोनमा गरिने मुख्य कटौतीहरु यस प्रकार रहेकाछन् :
फ्ल्यागसिप स्मार्टफोनमा सामान्यतया मिडरेन्जको भन्दा निकै अब्बल क्यामरा राखिएका हुन्छन् । फ्ल्यागसिप स्मार्टफोनमा राम्रो क्यामरा मात्र नभएर दुई वा तीनवटा क्यामरा पनि राखिएका हुन्छन् । र, हरेक क्यामराको आ–आफ्नै काम हुन्छ । मिडरेन्ज दुईवटा क्यामरा भएका स्मार्टफोन भेटिए पनि ती क्यामराको गुणस्तर फ्ल्यागसिपको जस्तै हुँदैन । २०१९ को सर्वोत्कृष्ट स्मार्टफोन क्यामरामा पनि सबै फ्ल्यागसिप मात्र छन् ।
अधिकांश मिडरेज स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा माथि उल्लेखित फिचर पाइँदैन । यो वर्गको स्मार्टफोन डिस्प्लेमा सबैभन्दा प्रचलित रेजोलुसनको १०८०पी र रिफ्रस रेट पनि ६० हर्जमै सीमित हुन्छ र डिस्प्लेमा टिएफटी ९त्ँत्०, क्ष्एक् कि त कम गुणस्तरको एमोलेड प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । तापनि दैनिक कार्यका लागि मिडरेन्ज स्मार्टफोनमा हुने डिस्प्ले सेवायोग्य हुन्छ ।
२०१९ का मिडरेन्ज उत्कृष्ट स्मार्टफोनहरू
१. रेड्मी नोट ७ / नोट ७ प्रो
रेड्मी नोट ७ सिरिजबाट थोरै मूल्यमा उच्चस्तरीय स्मार्टफोन प्रदान गरेर सायोमीले संसारलाई चकित बनाएको थियो । उक्त सिरिजका स्मार्टफोनहरू अहिले खरिदका लागि नेपाली बजारमा सजिलै उपलब्ध छन् । यी सिरिजमा सायोमीको रेड्मी ७ र रेड्मी ७ प्रो पर्छन - जस मध्ये रेड्मी ७ सस्तो र अलि कम फिचर भएको स्मार्टफोन रहेको छ भने रेड्मी ७ प्रो अलिक महँगो तर रेड्मी ७ को तुलनामा निकै अब्बल स्मार्टफोन रहेको छ ।
रेड्मी नोट ७ मा ६.३ इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले राखिएको छ र उक्त डिस्प्लेको माथि पट्टि सानो नचमा १३ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा राखिएको छ । रेड्मी नोट ७ प्रोमा भने ६.४ इन्चको फुल एचडी रेजोलुसनको डिस्प्ले राखिएको छ तर यस प्रो मोडलमा चाँही २५ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा राखिएको छ । दुवै मोडलको पछाडी मुख्य ४८ मेगापिक्सलको क्यामरा राखिएको छ तर रेड्मी ७ प्रोमा भने तीनवटा रिअर क्यामराहरू रहेकाछन् । पछाडी भएको क्यामराको संख्या रेड्मी नोट ७ मा भने दुई मै सिमित छ । रेड्मी नोट ७ मा स्नापड्रागन ६६० प्रोसेसर रहेको छ भने रेड्मी नोट ७ प्रो मा तुलनात्मक रुपमा केही हदसम्म फास्ट प्रोसेसर राखिएको छ । दुवै प्रोसेसरले साधारण प्रयोग देखि गेम खेल्नसम्म सबै कार्यहरू सजिलैसँग र राम्रोसँग संचालन गर्न सक्नेछन् । रेड्मी ७ प्रो र रेड्मी ७ दुवै मोडलमा ४००० mAh को ब्याट्री राखिएको छ जसलाई चार्ज गर्नका लागि १८ वाटको युएसबी सी फास्ट चार्जर पनि राखिएको छ ।
नेपाली बजार मूल्य: रेड्मी नोट ७ : नेरु २२,००० ( ३ जीबी र्याम / ३२ जीबी स्टोरेज ), २५,००० ( ४ जीबी र्याम, ६४ जीबी स्टोरेज), २७,००० ( ४ जीबी र्याम, १२८ जीबी स्टोरेज )
रेड्मी नोट ७ प्रो : नेरु २९,०००
२. रिअल्मी २ प्रो
रिअल्मीले छोटो समयमा नै मिडरेन्ज र बजेट स्मार्टफोन बजारमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । बजेट मूल्यमा पनि फ्ल्याग्शिप स्तरको डिजाइन प्रदान गरिएको रिअल्मी २ प्रो एक आकर्षक मिडरेन्ज स्मार्टफोन रहेको छ । यसमा ६.३ इन्चको फुल एचडी रेजोलुसनको डिस्प्ले राखिएको छ । अगाडी १६ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ भने पछाडी १६ मेगापिक्सल र २ मेगपिक्सलको डबल क्यामरा सेट अप रहेको छ । सबैलाई चलाउनका लागि मिडरेन्ज स्तरको निकै अब्बल प्रोसेसर - स्नापड्रागन ६६० राखिएको छ । ब्याट्रीको साइज भने अन्यको तुलनामा अलिक कम रहेको छ - केवल ३५०० mAh को ब्याट्री राखिएको छ । उक्त ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नका लागि १० वाटको चार्जर राखिएको छ जुन युएसबी सी होइन - रिअलमि २ प्रोले अझै पनि माइक्रो युएसबी नै प्रयोग गरेको छ ।
नेपाली बजार मूल्य : नेरु २४,०००